जब चोरी भएको थियो विश्व कपको ट्रफी, फेरि कुकुर बन्यो हिरो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
जब चोरी भएको थियो विश्व कपको ट्रफी, फेरि कुकुर बन्यो हिरो
एजेन्सी। फिफा विश्व कपका क्रममा मैदानभित्र आश्चर्यजनक पल हेर्न पाइन्छ। मैदानभित्र मात्र होइन बाहिर पनि केही यस्ता घटना हुन्छन् जसले मानिसलाई आश्चर्यमा पारिदिन्छन्। १९६६ को फिफा विश्व कपको आयोजना इंल्याण्डले गरेको थियो। तर यो टुर्नामेन्टभन्दा पहिला यस्ता घटना भयो जसले गर्दा इंल्याण्डको इज्जतमा दाग लाग्यो।
१९६६ को विश्व कप सुरु हुनुभन्दा चार महिना पहिला विश्व कपको ट्रफी चोरी भएको थियो। उक्त ट्रफीलाई लन्डनको वेस्टमिनिस्टरको सेन्ट्रल हलमा प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। जुन त्यहाँबाट चोरी भयो। सो ट्रफीको मूल्य ३० हजार पाउण्ड थियो। जतिबेला ट्रफी चोरी भयो, त्यतिबेला सो भवनको अर्को भागमा प्रार्थना सभा चलिरहेको थियो।
फिफा विश्व कपको ट्रफी चोरी भएपछि हल्ला खल्ला मच्चियो। लन्डन प्रहरीले ठाउँ ठाउँमा ट्रफीको खोजी गर्यो तर भेटिएन। रमाइलो त के भने चोरी भएको उक्त ट्रफीलाई पिकल नाम गरेको कुकुरले खोजेर भेट्टायो। एक दिन डेव नाम गरेका एक व्यक्ति आफनो कुकुरसँग हिँडिरहेका थिए।
त्यही क्रममा उनको कुकुर पिकल उनको छिमेकीको कारको चारैतर्फ झुक्दै घुम्न थाल्यो। जब डेवले कारलाई ध्यानपूर्वक हेरे, त्यँहा पेपरमा बोरिएको अवस्थामा विश्व कपको ट्रफी देखे।
त्यसपछि डेवले विश्व कप ट्रफीको जानकारी प्रहरीलाई दिए। विश्व कप ट्रफी खोजेको भन्दै डेवको कुकुर पिकललाई सम्मानित गरियो। साथै कुकुरलाई आजिवन खाने पिउने बन्दोबस्द गर्ने घोषणासमेत गरिएको थियो। १९६६ को विश्वकप इंल्याण्डले नै जितेको थियो।